China china n95 mask ukwenza umatshini ubuso ubuso indlebe loop ukuwelda umatshini oluzenzekelayo indlebe band umatshini iwelding umatshini mveliso kunye nabenzi | U-Haojing
Lo matshini we-earband ozenzekelayo ozenzekelayo usetyenziselwa ikakhulu ukuwelda iimaski ze-N95, kwaye ifuna umntu omnye ukuba awusebenze. Ngesilayi kunye nomatshini wokubopha umda, imaski epheleleyo inokuveliswa. Inokuvelisa iimaski ezingama-20 ngomzuzu.
Isixhobo sisebenzisa isikrini sokuchukumisa ukusebenza, esilungeleyo kwaye esikhawulezayo, kwaye useto lweparamitha luyabonakala ngokucacileyo, kwaye isixhobo sixhotyiswe ngesalathiso seziphoso, esinokufumana ngokukhawuleza iziphene kwaye sizisombulule ngexesha.
Phambi kokuba izixhobo zithunyelwe, siya kuqhuba ngokuchasene nomhlwa izixhobo kwaye sidubule ividiyo yokusebenza ukuze siqinisekise ukuba umthengi unokusebenzisa izixhobo ngesiqhelo.
Isetyenziselwe ukuwelda ngeentsontelo zemaski ze-KN95, inokusetyenziselwa isicoci kunye nomatshini wokubopha umda ukugqibezela imveliso yemaski iphela. Isetyenziswa ikakhulu kwimveliso yezococeko, iimveliso zonyango, iimveliso ezikhuselayo kunye namanye amashishini.
2000mm （L）* Kwi-1500mmW）* 1600mm （H）
Ukubekwa komngundo kwimaski
Isetyenziselwa ukubeka iziqwenga zemaski kunye nemitya ye-weld ezindlebeni ngeebhanti zokuhambisa
Ipleyiti yoxinzelelo, kukho inzwa apha, ukuba akukho sigqubuthelo, akukho xinzelelo luya kusetyenziswa. Ukuba unayo imaski, ungabeka uxinzelelo kwibhulorho yempumlo yemaski apha ukulungiselela ukudibanisa iintambo zeendlebe
Iphaneli yokusebenza enokuchukumiseka, ukubonwa kokusebenza kweparameter
Egqithileyo Umatshini wokugoba we-OEM we-3ply china umatshini wemaski ethe tyaba
Okulandelayo: Imaski yemanyuwali yokwenza umatshini abavelisi bendlebe yokujikeleza ubuso bemaski abavelisi